Noho ny aretina mahazo azy… : hisy ny “Tolo-tanana ho an’ i Lego” | NewsMada
Noho ny aretina mahazo azy… : hisy ny “Tolo-tanana ho an’ i Lego”
Miezaka amin’ny fitsaboana, mba ho salama tsara tsy hisy takaitra, i Lego. Antony hanaovana ny tolo-tanana, hanohanan’ireo mpanakanto namany azy izany.
“Namako ianao, mila anao aho”. Hafatra napetrak’i Lego anatin’ny pejy “facebook” io. Mahakasika inona ilay antso? Izao vao nanambara amin’ny besinimaro i Lego fa tratran’ny AVC, efa fotoana elaela izay. Nifanome tanana nitsabo azy ny fianakaviany sy ireo namany akaiky tao anatin’izay fotoana izay. Mihatsara hatrany ny fahasalamany, saingy mbola misy ampahany tsy ampy fihetsehana ny vatany ka mila tohizana tsaratsara kokoa ny famerenana izany.
Noho izany indrindra no nahatonga ny hetsika “Tolo-tanana ho an’i Lego”. Fampisehoana handraisana anjara mpanakanto maro izy io, izay hotontosaina rahampitso alakamisy 12 oktobra, manomboka amin’ny 8 ora alina, etsy amin’ny Le Glacier Analakely. “Maro ireo mpanakanto ho avy ao, izay namaly ny antso nataon’i Lego. Hanentananay ireo mpankafy io, satria ao anatin’ny fitsaboana izy izao”, hoy ny nambaran’i Roberto, anisan’ireo mpikarakara ny hetsika.
Raha hiverenana kely, efa herinandro maromaro no voan’ny AVC i Lego. Tranga nampalahelo nihatra taminy no nitarika ny fahatsentsenan’ny lalandrà, raha ny fanazavana. Nanaraka fitsaboana akaiky izy nanomboka teo, satria nisy ampahany tsy nihetsika ny vatany. Efa mihatsara kosa izany ankehitriny, satria efa mianatra mandeha i Lego. Raha mitohy tsara ny fitsaboana, afaka miverina amin’ny laoniny izany. Izay indrindra no hantenain’ny rehetra, ka nahatonga ny hetsika tolo-tanana, mba hanampiana azy.
Tsiahivina fa anisan’ireo mpanakanto miavaka amin’ny fitendrena angorodao i Lego, ary efa nisongadina hatrany ivelany koa izy.